Saddex haween oo loo xidhay weerarkii Argagixisada ee Willesden - BBC Somali
Saddex haween oo loo xidhay weerarkii Argagixisada ee Willesden
Lahaanshaha sawirka Graham Eva
Image caption waa booliska oo ku sugan madasha uu weerarka ka dhacay
Ciidamada Booliska ee London ayaa xabsiga dhigay saddex qof oo dumar ah oo lala xiriirinayo hawlgalkii ka dhanka ahaa argagixisada ee toddobaadkii hore, kaasi oo boolisku ay sidoo kale ku toogteen qof kale dumar ah.
Labo ka mid ah haweenkaasi oo da'dooda lagu kala sheegay 18 jir iyo 19 jir ayaa la xiray maanta oo Isniin ah kaddib markii looga shakiyay in ay maleegeen falal arggagixisnimo.
Arrintaan ayaa daba socotay howlgal kale oo ka dhan ah argagixisada oo khamiistii laga fuliyay London, kaasi oo guri ku yaala Willesden lagu toogtay haweeney 21-sano jir ahayd.
Sida uu boolisku sheegay saddexda haweenka ah ee la soo qabtay ayaa waxa ay ku xiran yihiin meel ka baxsan magaalada London.
Haweenkan ayaa la xiray kaddib markii saraakiisha booliska ee la dagaalanka argagixisada ay ruqsad u soo heleen in ay u dhaacan saddex guri oo ku yaala bariga magaalada London.
Haweeneyda 21- sano jirka ahayd ee boolisku ay toogteen intii uu socday howlgalka ayaa laga saaray Isbitaalka maalintii Axada ahayd, ka hor inta aan loo soo xirin abaabulka iyo maleegidda falal argagixisnimo.
Waxaa la rumeysan yahay in howlgalkaas uu yahay kii ugu horeeyay oo ay ciidamada boolisku ku toogtaan qof haweeney ah muddo ku siman 10-sano, iyadoo sanadkii 2007 ay ahayd markii Ann Sanderson lagu toogtay Jaamacada Kent.
Lix qof oo kale oo lala xiriirinayo dhacdadan ayaa la xidhay, kuwaasi oo shan ka mid ah ay ku sugnaayeen nawaaxiga Willesden, halkaasi oo in muddo ahba ay boolisku isha ku hayeen, halka qofka lixaad laga soo qabtay Kent.